N'ezie, fọrọ nke nta niile kọfị omenala na Europe na n'ebe ọdịda anyanwụ ụwa na-abịa site Italy. Nke a bụ ya mere kọfị dị iche iche dị iche iche anyị ji a drinkụ Italian aha.
Ebe dị nkeji ole na ole ka ọ na -aga site n'ọdụ ụgbọ oloko Milan dị n'Itali aha Cafe a bụ aha ya kọwara nke ọma. Nwamba na -ejegharị na cafe a mara mma ka ị na -eri nri ma na -a drinkụ. A na-ahụ maka cafe a na-atọ ụtọ maka inwe tii mara mma nke e ji eme ihe n'ụdị oke nwamba ma nwee achịcha na-atọ ụtọ. Ndị ọrụ na-super enyi na enyi na ọtụtụ ndị nwamba na-mgbe na-ehi ụra, nke a bụ ihe ha na-amasị ime.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịhụ ihe dị ukwuu otú banyere Italian kọfị, na nke a bụ ebe ileta. The dịgasị iche iche nke coffees na-atọ ụtọ arụrụ n'ụlọ snacks ka a a na-ewu ewu kọfị ntụpọ ma ndị njem nleta na obodo. Nke a bụ a akwa ebe na-nri ụtụtụ na akanyam ụfọdụ coffees maka a Euro ma ọ bụ obere. Nke a ahịa kọfị bụ oche nkwagharị inweta, nwere WiFi, bụ Pita-enyi na enyi, ma nwee a mmanya mmanya nke ọma. A asaa nkeji ije si ebe.
Akwụkwọ gị ọzọ ụgbọ okporo ígwè na njem iji Save a Train and see many train ojii in Italy.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcoffee-shops-train-stations-in-italy%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Enwere m mmasị njem mana ị tụghị anya ka m ghara ikwu nke ahụ, Abụ m onye nweere onwe ya na-aga Europe na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ụgbọ oloko, olile anya na ihe gi dere masiri gi - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m
10 Best cafes N'ihi The Best Coffee Na Europe
Train Travel Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel France, Inzọ Njem Italytali, Ingbọ ologo Spain, Train Travel Switzerland, Train Travel UK, Travel Europe
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Train Travel Hungary, Inzọ Njem Italytali, Train Travel The Netherlands, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe